कोरोना भाइरसका बिरामी भेटिदै गर्दा, कञ्चनपुर र इटहरीमा घटेका अचम्मका घटना, अलिकति मानव न भै दानवको व्यवहार देखियो ! – Media Np Online
मुख्य पृष्ठ /News/कोरोना भाइरसका बिरामी भेटिदै गर्दा, कञ्चनपुर र इटहरीमा घटेका अचम्मका घटना, अलिकति मानव न भै दानवको व्यवहार देखियो !
कोरोना भाइरसका बिरामी भेटिदै गर्दा, कञ्चनपुर र इटहरीमा घटेका अचम्मका घटना, अलिकति मानव न भै दानवको व्यवहार देखियो !
कञ्चनपुरको वेदकोट नगरपालिका–९ सुन्दरपुरस्थित कृषि तालीम केन्द्रको भवनको क्वारेन्टाइनबाट भागेका दुई जनालाई नियन्त्रणमा लिई पुनः आज क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ । गएराति क्वारेन्टाइनको छतबाट हा-मफा-लेर भागेका निरज कुवँर र सुरज कुवँरलाई घरबाटै सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा नियन्त्रणमा लिई क्वारेन्टाइनमा राखिएको नगरपालिकाको क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन समितिका संयोजक रामसिंह धामीले बताउनुभयो ।
“दुवै जनालाई घरमै फेला पारी ल्याएर पुनः क्वारेन्टाइनमा राखेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो । क्वारेन्टाइनको सुरक्षार्थ दुई जना शुरक्षाकर्मीसमेत तैनाथ गरिएका छन् । क्वारेटन्टाइनको सुरक्षा व्यवस्थामा कडाइ गरिएको छ । गत चैत २० गते दुवै जना भारतको नयाँ दिल्लीबाट फर्केपछि क्वारेन्टाइनमा बस्दै आएका थिए । क्वारेन्टाइनमा भारतबाट फर्केका २३ जनालाई राखिएको छ ।
त्यस्तै इटहरी उपमहानगरपालिकाले स्थापना गरेको क्वारेन्टाइनबाट एक भारतीय युवा भाग्न खोजेका छन् । इटहरी ५ स्थित जनता बहुमुखी क्याम्पसमा स्थापना गरिएको क्वारेन्टाइनबाट अन्दाजी २०–२१ बर्षका एक भारतीय युवा दुई तलाबाट -हाम फा-लेर भाग्न खोजेका थिए।
भा-ग्न खोजेका उनलाई तत्कालै शसस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाको टोलीले क्वारेन्टाइन स्थलबाट तीन सय मिटर परबाट नियन्त्रणमा लिएको छ। ती युवा भा-गेर मानव बस्तीमा पसेपछि केही समय आ-तंकित अबस्था बनेको थियो ।